सबैको उम्मेद्‍वारको एउटै सपनाः समृद्ध भरतपुर - Karobar National Economic Daily
सबैको उम्मेद्‍वारको एउटै सपनाः समृद्ध भरतपुर
query_builderMay 9, 2017 11:53 AM supervisor_accountकारोबार visibility4664
यही वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिने होडबाजी सुरु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकाहरू आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै जनतालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
मेयरमा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आफू विजयी भएमा भरतपुरको विकासमा कायापलट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका देवी ज्ञवाली, एकीकृत नेकपा माओवादीकी रणु दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बद्री तिमिल्सिना, नयाँ शक्ति पार्टीका सूर्यप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले भने मेयरमा माओवादीका उम्मेदवार दाहाललाई समर्थन गर्ने जनाइसकेको छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आफू विजयी भएमा भरतपुर महानगरपालिकालाई मुलुककै नमुना महानगरका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाका समस्या, समाधानका लागि गर्नुपर्ने काम र उम्मेदवारका एजेन्डा के छन् भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी दीपेन्द्र अधिकारीले एकीकृत नेकपा माओवादीका मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहाल, नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र राप्रपाका उम्मेदवार बद्री तिमिल्सिनासँग गरेको कुराकानीको सारः
महानगर हाम्रो एजेन्डा हो
रेणु दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्र
भरतपुर महानगरपालिकामा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
भरतपुर महानगरपालिका म जन्मे-हुर्केको ठाउँ हो । जनयुद्धको अवधिमा भूमिगत जीवनले मलाई धेरै कुरा सिक्न र नेतृत्व लिन सक्ने बनाएको छ ।
म महानगरलाई विदेशका विकसित महानगरजस्तो बनाउने गरी नेतृत्वमा आउन चाहन्थें । स्थानीय तहको चुनावमा मेरो चाहना मात्रै होइन, पार्टीले आवश्यक ठानेर मलाई महानगरमा मेयर पदमा उठाएको हो । सुरुको अवस्थामा रहेको महानगरलाई देशकै उत्कृष्ट महानगर बनाउन चाहन्छु ।
महानगरलाई कस्तो बनाउने योजना छ ?
भरतपुर महानगरपालिकामा धेरै सम्भावना छन् । धेरै काम गर्नु छ । मेट्रो ट्रेन सञ्चालन भएको महानगर बनाउन चाहन्छु । सबै सडक कालोपत्रे, सडक सञ्जाल नपुगेका ठाउँमा सडक विस्तार गर्ने काममा लाग्नेछु । व्यवस्थित अस्पतालको सहर बनाउने योजना ल्याउँदैछु ।
जस्तोसुकै रोगको उपचार भरतपुरमा सम्भव हुने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने सोच छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउन लागिपर्नेछु । पब्लिक क्याम्पसको समन्वयमा पब्लिक युनिभर्सिटी निर्माण गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नेछु । भ्रष्टाचार, अनियमितता शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु ।
बरन्डाभार जंगल किनार, राप्ती नदी किनार हुँदै गोलाघाटबाट नारायणी नदी किनार हुँदै भरतपुर महानगरपालिकालाई घेरेर स्तरीय रिङरोड बनाउने र सो रिङरोडले सबै वडालाई छुने गरी सडक सञ्जाल पुर्‍याउन लाग्नेछु । त्यसैगरी सुकुम्बासी समस्या समाधान मेरो उच्च प्राथमिकताको विषय हो । भरतपुरलाई सुकुम्बासीमुक्त महानगर बनाउनेछु ।
जमिन बाँझो राख्नेलाई अतिरिक्त कर लगाएर नियममा कडाइ गर्नेछु । सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेर कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ । निजी क्षेत्रको समन्वयमा प्रत्येक वडामा फनपार्क, मनोरञ्जनस्थल, वृद्धाश्रम, अनाथालय निर्माण हुनेछन् ।
महानगरभित्र पर्यटकीयस्थल विस्तारका योजना के छन् ?
पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धार्मिक केन्द्र बनाउने योजना बनाइनेछ । देवघाटदेखि गोलाघाटसम्म स्टिमर र साना फेरीहरूमार्फत जलयात्राको व्यवस्था मिलाइनेछ । नारायणी नदी किनारको उचित तटबन्धन गरेर हरित बेल्टसहितको मनमोहक पार्क बनाइनेछ । प्रत्येक वडामा होमस्टे निर्माण गरिनेछन् ।
हरित महानगरपालिका बनाउन ‘एक घर, दुई रूख’को अवधारणा कार्यान्वयन गराइनेछ । जंगल किनारमा हरित मनमोहक बगैंचा निर्माण र तारबारको व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ । कविलासमा केबुलकारसहितको भ्युटार बनाइनेछ । पदमार्ग बनाई पर्यटकको गन्तव्य बनाउन लागिपर्नेछु । महानगरसँग जोडिएका निकुञ्ज क्षेत्र, गोलाघाटदेखि कविलाससम्म पर्यटनको सम्बन्ध जोड्ने खाका निर्माण गरिनेछ ।
माओवादी केन्द्रले लिएको नीति तथा एजेन्डा नै यतिबेला कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकजस्ता कुरा माओवादी आन्दोलनका उपज हुन् । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले चुनाव जितेको क्षेत्र पनि हो । महानगरमा पार्टी संगठन बलियो छ ।
महानगरपालिका बनाउन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । महिला नेतृत्व भूमिगत जीवनबाट राजनीतिमा आएको छु । सांसद् भएर पनि महानगरको नेतृत्व लिन मैले दिएको उम्मेदवारीलाई जनताले समर्थन गरेका छन् । जनता, नेता, कार्यकर्ताको एकता नै जितको आधार हो ।
पार्टी अध्यक्षको छोरी भएकै कारण टिकट पाएको भन्ने आरोप छ नि ?
टिकट पाउन बा, आमा राजनीतिमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । म आफैं राजनीतिमा लागेकी छु । बुबा राजनीतिमा हुँदैमा मैले आफ्नो राजनीतिक यात्रा किन रोक्ने ? म प्रदेशको नेता बन्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना थिए । तर, पार्टीले मलाई भरतपुर महानगरको मेयरमा पठायो । आफू जन्मे, हुर्केको ठाउँको जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्न मैले किन नपाउने ? मैले चुनाव जिते पनि वा हारे पनि चितवनको विकासमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु ।
मेरो मैदान खाली भयो
देवीप्रसाद ज्ञवाली, नेकपा एमाले
तपाईंको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस मैदानबाट बाहिरिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो घटनाले मेरो मैदान खाली गरिदिएको छ । मेरो मुख्य प्रतिस्पर्धा नै नेपाली कांग्रेससँगै थियो । अब उहाँहरू पछि हट्नुभएपछि मलाई त आराम भएको छ । म त अब मेरो अगाडि कोही देख्दै देख्दिनँ ।
अनि कांग्रेसले त माओवादीलाई सहयोग गरेको छ । रेणु दाहाल झनै बलियो हुनुभएको होइन र ?
नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताले विरोध गरेको देख्नुभएको छैन ? के यो निर्णयलाई चितवनका कांग्रेसीजनले स्विकारेका छन् ? कांग्रेसका बहुसंख्यक कार्यकर्ता कैयौं वर्ष हिंसाविरुद्ध जोसँग लड्नुपरेको थियो, त्यसैलाई भोट हाल्न तयार छैनन् । उहाँहरूसँग मिल्ने त बरु हामी हौं । कैयौं आन्दोलनमा हामी सँगै थियौं । मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई केही भन्नु छैन ।
तर, चितवनको आन्दोलनमा रेणुजीको भूमिका के ? चितवनको विकासमा यहाँको गतिविधिको उहाँको हिजोको भूमिका के ? नागरिकले उहाँको योगदान देख्नुपर्छ । म प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको हिसाबले धेरै टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।
तर, मेरो तुलना रेणुजीसँग कुनै पनि हातलमा नगरिदिनुस् । मेरो राजनीतिक पैतृक वरदान होइन । उहाँ त पैतृक राजनीतिमा रमाउन खोजिरहनुभएको छ । यो अवस्थामा जनताले बुझ्छन् कि देवी ज्ञवालीको विकल्प अब छैन ।
आमजनताले तपाईंलाई किन भोट दिने ?
मैले विगतमा जे काम गरें, त्यसलाई जनताले राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नुभएको छ । मान्छेको परीक्षण व्यवहारबाट हुने हो । परीक्षणमा नपरेका मान्छेको विश्वास गरिँदैन । म त जनताको कसीमा खारिएर, घोटिएर परिपक्व भएको छु । एकपटक निर्वाचित भएर मात्रै होइन, पछि पनि मैले गरेको कामको जनताले प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
बीचमा जनप्रतिनिधि रहिनँ । चार–चारवटा कार्यकालसम्म रिक्तता रह्यो । अब यो रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न तपार्इं आउनुस् भनेर जनताले नै आग्रह गरेपछि म चुनावी मैदानमा आएको छु । हामीले जनतालाई लादेका छैनौं, जनस्तरबाट नै यसको माग भएको छ ।
छोटो समयमै भरतपुर नगरपालिकाबाट महानगरपालिका बन्यो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
रातमा अनि दिनमा मेरो आँखाअगाडि एउटा चित्र नाचिरहेको छ- ‘भरतपुरलाई समृद्ध बनाउने ।’ त्यो चित्रमा मैले कविलासलाई भरतपुरको शिरका रूपमा लिएको छु । त्यसमा भविष्यको राम्रो ‘समरहिल स्टेसन’ को सम्भावना छ । गर्मीले छटपटाइरहेका हामी त्यहाँको शीतलता पाउन सक्नेछौं ।
नारायणी नदी चितवनका लागि वरदान सावित हुनेछ । सधैं जनताको खेत, बारी, घर बगाएर नारायणी नदीलाई दुःखका रूपमा लिइँदै आएको छ । तर, नारायणी नदी हाम्रो लागि दुःख नभई उपहार हो । यो वरदानलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौं ।
यसको उपयोग गरेर हाम्रै महानगरपालिकाले जनताको सहलगानीमा १ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । यसले अन्धकारको त अन्त्य गर्छ नै, त्यसमाथि हाम्रो आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनेछ ।
तपाईंको जितको आधार के ?
म जनताका समस्यासँग विगतदेखि नै निरन्तर निकट रहेर काम गरिरहेको छु । उहाँहरूको सामाजिक, पेसागत तथा संस्थागत समस्या समाधानका काममा पनि म केन्द्रित छु । उदाहरणका लागि अहिले भरतपुर–१० का नागरिक एउटा ठूलो समस्यामा हुनुहुन्छ, एयरपोर्टवरपरको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कारणले ।
बस्ती बसिसकेको अवस्थामा बस्ती सार, घर नबनाऊ भन्ने जस्तो सूचनाले उहाँहरू मर्माहत हुनुहुन्छ । यसको व्यवस्थापन आवश्यकता छ । यसको मतलब एयरपोर्ट हुनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, कहाँ एयरपोर्ट हुने, कहाँ रंगशाला हुने, कहाँ वधशाला हुने भन्ने कुरा सहरको बस्तीसँग जोडिएको हुनाले यसलाई गम्भीरताका साथ समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै नारायणी नदीको २०३६ सालमा बनेको पुल पुरानो भइसकेको छ ।
यसलाई निर्माण गरी जनतालाई सहज बनाइदिनुपर्छ । म महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएमा प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख भएका सबै कुरा पूरा गर्नेछु । त्यस्तो काम गर्न सक्ने साहस र दृढ क्षमता ममा मात्र छ भन्ने लागेको छ । जनताले विश्वास गरेर मलाई मत प्रदान गर्नुहुने आशा गरेको छु ।
एजेन्डाकै कारण जित्छु
बद्री तिमिल्सिना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
म यहीँको स्थायी बासिन्दा हुँ । यहाँका समस्या र सम्भावनाबारे म पूर्ण रूपमा जानकार छु । विगतमा पार्टी र सामाजिक संघसंस्थामा लागेर सफल नेतृत्व गरिसकेको छु । भरतपुर महानगरपालिका बनाउन पार्टीका तर्फबाट मैले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरें । महानगरका हरेक ठाउँको अवस्थाबारे मैले बुझेको छु । महानगरलाई अब्बल महानगरपालिका बनाउन मैले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि जनतासँग के भनेर भोट माग्दै हुनुहुन्छ ?
स्पष्ट बोल्छु । कुरा लुकाएर बोल्ने बानी छैन । सुरुमै सबै कुरा गर्छु भनेर अहिल्यै म झूटा आश्वासन बाँड्दिनँ । गर्न सक्ने कामकै खाका लिएर घरदैलोमा पुगेको छु । महानगरलाई एसियाकै उत्कृष्ट महानगर बनाउन सकिने प्रबल सम्भावना छन् ।
उद्योग, वाणिज्य, सञ्चार, सडक, यातायात, पर्यटन, ऊर्जा प्रवद्र्धनजस्ता थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हरेक वडामा स्तरीय कालोपत्रेसहितको सडक पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । महानगरभित्र व्यवस्थित बसोबास, व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । यी थुप्रै काम गर्न सक्ने विश्वास छ । महानगरपालिकामा दुई विमानस्थल छन् ।
भरतपुर विमानस्थल आसपासका स्थानीय समस्यामा परेका छन् । मेघौली विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिने सम्भावना छ । सुन्दर महानगरपालिका बनाउन सकिने हामीसँग थुप्रै योजना छन्, जुन सम्भव छन् । विगतमा ठूला दलबाट जनता आजित छन् । हाम्रो पार्टीका एजेन्डा जनताले रुचाएका छन् । जनताको साथ पाएमा मैले महानगरको मुहार र विकासमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छु ।
मेयर बन्दैमा यति छिटै सबै काम होलान् र ?
पाँचवर्षे कार्याकालमा हामी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं । महानगरभित्र हुने चुहावट मात्रै रोक्न सक्ने हो भने धेरै सुधारका बाटा आफैं सिर्जना हुन्छन् । राप्ती र नारायणी नदीलाई उपयोग गरेर ऊर्जा, पर्यटन, सिँचाइमा लगाउन सकिन्छ, जसले आर्थिक विकासमा सघाउनेछ ।
सबै सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्न सकिन्छ । उज्यालो भरतपुर बनाउन सकिन्छ । महानगरपालिकाभित्रका सरकारी जग्गामा पार्क बनाउन सकिन्छ । सुरुको वर्षमा यति काम गर्न कुनै गाह्रो छैन । परिवर्तनको लहर अवश्य आउनेछ ।
महानगरका धेरै वडा विकासमा धेरै पछि छन्, तिनको विकासका कस्तो खाका बनाउनुभएको छ ?
कविलास, साविक नारायणी नगरपालिका, चितवन नगरपालिकामा तत्कालीन उपमहानगरपालिकामा गरिने विकास कार्यक्रमभन्दा बढी योजना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । जंगली जनावरबाट प्रभावित महानगरपालिकामा अत्याधुनिक मेस जाली प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले सुरक्षित मानवबस्ती बनाउन सहयोग गर्नेछ । महानगरभित्र चक्रपथ अति आवश्यक छ ।
चक्रपथमा ‘मेट्रो ट्रेन’ व्यवस्था गराउन लाग्ने प्रतिबद्धता गरेको छु । महानगरभित्र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना ल्याइनेछ । महानगरभित्रका हरेक सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई छिटो–छरितो सेवा दिन कम्युटर अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गराउन लाग्छु । महानगरभित्र बन्न लागेको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रलाई पूर्णता दिन हामी लागिपर्नेछौं ।
तपाईंले जित्ने आधार के छ ?
विगतका चुनावमा राप्रपा र राप्रपा नेपालले हालको महानगरबाट राम्रो नतिजा हासिल गरेको थियो । महानगरको पश्चिम भेगमा हाम्रो पकड राम्रो छ । हिन्दू राष्ट्रलगायत हाम्रा एजेन्डा धेरैले रुचाएका छन् ।
महानगरमा दलबीचको चुनावी तालमेलले पनि सघाउने आकलन गरेको छु । युवा, वृद्ध, महिला, सबै जातजाति, भाषाभाषीको साथले जित्ने कुरामा ढुक्क छु । अन्य दलका उम्मेदवारभन्दा बढी म महानगरलाई चिनेको व्यक्ति हुँ । पार्टीको संगठन पनि बलियो छ । हामी घरदैलोमा पुग्दा जनतामा उत्साह छ । यी सबै कारणले हामी जित्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
स्थानीय निर्वाचन चितवन भरतपुर महानगर